Archive du 20191227
Toe-draharaha politika Hangotraka ato anatin’ny 24ora…
Andrasana izay zavatra hiseho ara-politika eto Antananarivo ao anatin’ny 24ora eo anatrehan’ny filaharambe kasain’ny Rodoben’ny mpanohitra na ny RMDM, TIM,
Fampihavanam-pirenena Ny Barea no mahavita
Nanomboka ny taona 2019 dia mbola hita soritra ny ady politika satria vao nahavita fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara.
Potika ny firenena sy ny fiarahamonina Manana andraikitra lehibe ny fiangonana
Zava-dehibe ny fiarahamonina sy ny fampihavanam-pirenena. Efa nahatsapa izany isika fa ny dingana dia hitantsika fa mandeha moramora.
Dany Rakotoson « Tokony hisy gazety manazava lalàna amin’ny vahoaka »
Fanontaniana mipetraka matetika ny hoe miainga avy aiza ireny tolo-dalàna tonga eny amin’ny antenimiera ireny ? Ny zava-misy dia na avy amin’ny fiarahamonim-pirenena na governemanta izany,
Tompondakan’ny UFFOI 2019 Notolorana 1 tapitrisa avy ny Barea vehivavy
Nandray ny ekipam-pirenena vehivavy Barea U20 vehivavy, izay nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny « Tournoi UFFOI 2019 » natao tatsy amin’ny Nosy Maorisy,
Nahita ny tsy fahita 58 taona…
Vao nandray ny fitondrana ny fanjakana Rajoelina, dia efa niteraka adihevitra ny fandreseny, izay anisan’ny nanampy azy ny “azo raisina fa tsy mitombina” nataon’ny HCC.
Fanamboaran-dalana Tsy hajain`ireo orinasa ny bokin`andraikitra
Ny 80% amin`ny asa fanarenana amin`izao no vita tanteraka, indrindra amin`ireo toerana nandraisana fimenomenonana avy amin`ny mpampiasa lalana.
Grevy eny ankatso Ho samborina indray i Berija ?
Ny 17 desambra teo no efa nahazo fampiantsoana ho avy teny amin’ny Borigadin’ny zandarimariam-pirenena teny Betongolo i Berija Ravelomanantsoa.
Aretina habokana 2 000 isan-taona no mbola voany eto amintsika
Ny taona 2006 ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny fahasalamana (OMS) no nanambara fa tsy anisan’ny olan’ny fahasalamam-bahoaka maneran-tany intsony ny habokana.
Fitakiana sendikaly Mampiaka-peo indray ny SSM
Raha ny zava-misy ankehitriny, misy tsy mazava eto amin’ny firenena.
Ady amin’ny fahantrana Manetsika manampahaizana ny HAFARI
Mamerina hatrany ny fikambanana HAFARI Malagasy tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina fa tsy misy ohatra ny famoronan’asa
FAHASALAMANA HO AN’NY REHETRA Hopitaly CHRR 40 hatsangana ny taona 2020
Mbola betsaka ireo faritra lavitra andriana tsy manana tobim-pitsaboana eto amintsika.
Orinasa Egypsiana Elsewedy Electric Hamatsy fitaovana harifomba ny Jirama
Hiara-kiasa akaiky ny orinasa JIRAMA sy ny orinasa Egypsiana Elsewedy Electric. Hiompana amin’ny famatsiana kaontera « intelligent », izany hoe :
Estellah tsy hita popoka Nampijaliana avy eo nesorina ny ainy…
Tamin’ny talata 24 desambra lasa teo no very tsy hita rehefa nilalao teo an-tokotaniny, teny Anjanadrambony Itaosy, i Manana Estellah, zazavavikely manodidina ny 5 na 6 taona eo.
Le Buffet du jardin Antaninarenina Sahirana 350 no nahazo sakafo maimaimpoana
Toy ny fanaon'izy ireo isan-taona tao anatin'ny 5 taona nisesy izao dia nahatsiaro an'ireo olona sahirana mivezivezy eny amin'ny faritra
Fetin’ny asaramanitra Nijery manokana ireo sahirana ny orinasa Star
Nijery manokana ireo sahirana sy niangaran’ny vintana ny orinasa Star amin’izao fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao.
Traikefa azo teo amin’ny asa Azo havadika ho diplaoma atsy ho atsy
Miroso tsikelikely mankany amin’ny famadihana ho diplaoma ny traikefa azo teo am-perinasa i Madagasikara na ilay antsoina hoe : Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Kolikoly avo lenta 80 ny dosie no voarain`ny PAC
Miisa 80 ny fitambaran`ireo antontan-taratasin`ady voarain`ny fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) ka 66 amin`ireo no voatsara tamin`ity taona ity.
CRRC mpamokatra lamasinina any Sina Zaza mitrandraka “mica” eto no mamelona azy…
Ankizy maherin’ny 10 000 isa eto Madagasikara no ampiasaina amin’ny fitrandrahana eladrano (mica),
Gidro eto Madagasikara Ho potika afaka 50 taona ny 90%-n’ny fonenany
Hanjavona ny 90% mahery amin’ny toeram-ponenan’ireo gidro eto amintsika afaka 50 taona. Io no voalazan’ny voka-panadihadiana navoakan’ny gazety-boky “Nature climate change”,
Zanany 5 taona tsy tiany hijaly Nentiny namono tena tao Tritriva…
Nahitana fatina mpianaka natsingevan’ny rano efa tsy nisy fofon’aina intsony omaly atoandro tao amin’ny farihin’i Tritriva ao amin’ny distrikan’i Betafo.